DPDMadmin – Doh Pyay Doh Myay / Our Land Our Region
by DPDMadmin · Published April 25, 2018 · Last modified August 21, 2018
Welcome to the 3rd show of the 6th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Falam (Chin State) ချင်းတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ကြွမ်ဘိခ်(ခ)ဗိုလ်ဆွန်ပက် ရဲ့ဇာတိမြေ တောင်ဇလပ်ပန်းတွေဝေပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပင်အထက်ပေ ငါးထောင်ကျော်မှာ ဗြိတိသျှလက်ထက်က အစိုးရရုံးစိုက်ခဲ့ရာဒေသ ဖလမ်းဆိုတဲ့ အမည်စတင်ပေါ်ပေါက်ရာ သမိုင်းဝင်တာရွှန်းရွာလေးရှိရာဒေသ...
by DPDMadmin · Published April 25, 2018
Welcome to the 2nd show of the 6th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Hakha (Chin State) ပေပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်အမြင့်မှာတည်ရှိတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြို့တော်။သွေးခဲမတတ်အေးတဲ့မြို့လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့”ဟားခါးမြို့” ဒီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်လူနေမှုဘဝတွေ၊ ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေပေါ်မှာ သာသနာပြုနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေအကြောင်းနဲ့ ချင်းရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆာဗူးသီးချက်ပြုတ်နည်းစတာတွေကို ဒီတစ်ပတ်...
by DPDMadmin · Published February 27, 2018
Welcome to the 1st show of the 6th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Dagon Seikkan (YANGON REGION) “ရွာမှာနေလို့အဆင်မပြေ ထမင်းငတ်လို့ မြို့ပေါ်တက်လာခဲ့တာ ဒီမှာလဲဒီလို့ပဲဒုက္ခရောက်တာပဲ အလုပ်မရှိတဲ့အခါကများနေတယ်” ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် လက်မှုလယ်ယာမှစက်မှုလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းလာတဲ့...
by DPDMadmin · Published February 4, 2018
Welcome to the 24th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Demoso (Kayah State) ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေထဲက ကယား၊ ကယန်း လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ ကယားပြည်နယ်ထဲက ဒီမောဆိုမြို့၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူနေမှုဘ၀တွေကို ရှု့စားကြရမှာပါ။ ဒီအစီစဉ်ထဲမှာတော့...
by DPDMadmin · Published February 2, 2018 · Last modified February 4, 2018
Welcome to the 23rd show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Pekon (Southern Shan State) မြန်မာတနိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့အတွက် လောပိတရေးအားလျှပ်စစ်ကို အားကိုးရသလို လောပိတနဲ့ ဘီလူးချောင်းကလဲ မိုးဗြဲရေလှောင်တမံနဲ့ ဖယ်ခုံအင်းကို အားကိုးနေရတာပါ။ မိုးဗြဲရေလှောင်တမံကြောင့်...
BOGALAY DPDM5 # 22
Welcome to the 22nd show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Bogalay (Ayeyarwaddy Division) ပဒေသရာဇ်ခေတ်က မွန်လူမျိူးစစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်က စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရင် ဧရာဝတီတိုင်းမြစ်ဝကျွန်ပေါ်သေဒမှာ ရွာတစ်ရွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစစ်ဗိုလ်ကလေးကို အစွဲပြုပြီး ဗိုလ်ကလေးမြို့လို့ အမည်တွင်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက...
Welcome to the 21st show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to PYAPON (Ayeyarwaddy Division) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲက ရေလုပ်ငန်းမှာ အချက်အချာကျတဲ့မြို့လေးဖြစ်တဲ့ ဖျာပုံမြို့ အကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်တို့ပြည်တို့မြေ အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းက ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်...
by DPDMadmin · Published February 1, 2018
BHAMO DPDM5 # 20
Welcome to the 20th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Bhamo (Kachin State) ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းတည်ရှိရာ ဗန်းမော်မြို့ရဲ့ အနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့လူနေမှု့ဘဝတွေကိုရှူ့စားကြရမှာပါ။ မိသားစုရပ်တည်မှု အခက်အခဲတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ တစ်ဖက်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်သို့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရန်...